Ukubhekana kukaNkulunkulu nesimo sangaphandle sabantu nakho kuyingxenye yomsebenzi Wakhe; ukubhekana nobuntu babantu bangaphandle obungajwayelekile, ngokwesibonelo, noma inqubo-mpilo nemikhuba yabo, izindlela namasiko abo, kanye nezindlela zabo zokwenza okungaphandle, kanye nentshisekelo yabo. Kodwa uma ecela ukuba benze iqiniso futhi bashintshe izimo zabo, lokho obhekene nakho ikakhulukazi ukukhuthazeka nemibono engaphakathi kubo. Ukubhekana nesimo sakho sangaphandle kuphela akunzima; kufana nokukucela ukuthi ungadli izinto ozithandayo, okuyinto elula. Lokho okuthinta imibono onayo ngaphakathi kuwena, nokho, akulula ukuthi uyishiye: kudingeka ukuthi uhlubuke enyameni, futhi wenze konke okusemandleni, futhi uzwe ubuhlungu phambi kukaNkulunkulu. Lokhu kunjalo impela ngokuphathelene nokukhuthazeka kwabantu. Kusukela esikhathini sokuqala kwabo ukukholwa kuNkulunkulu kuze kube inamuhla, abantu bebelokhu begcine ukukhuthazeka okungalungile. Uma ungalenzi iqiniso, uzwa sengathi zonke izisusa zakho zilungile, kodwa uma into ethile yenzeka kuwe, uyobona ukuthi kuningi ukukhuthazeka okungalungile phakathi kwakho. Ngakho, uma uNkulunkulu ephelelisa abantu, ubenza babone ukuthi kunemibono eminingi ngaphakathi kubo evimba ulwazi lwabo ngoNkulunkulu. Uma ubona ukuthi ukukhuthazeka kwakho akulungile, uma ukwazi ukuyeka ukwenza ngokuhambisana nemibono nokukhuthazeka kwakho futhi ukwazi ukufakazela uNkulunkulu, futhi ume uqine endaweni yakho kukho konke okwenzeka kuwe, lokhu kuyakhomba ukuthi uyihlubukile inyama. Uma uhlubuka enyameni, nakanjani kuzoba khona impi ngaphakathi kwakho. USathane uzozama ukwenza abantu bamlandele, uzozama ukubenza ukuthi balandele imibono yenyama futhi baphakamise izidingo zenyama—kodwa amazwi kaNkulunkulu azokhanyisela futhi akhanyise abantu ngaphakathi, futhi ngalesi sikhathi kukuwe ukuthi ulandela uNkulunkulu noma ulandela uSathane. UNkulunkulu ucela abantu ukuthi benze iqiniso ngokoqobo ikakhulukazi ukuze babhekane nezinto ezingaphakathi kubo, ukubhekana nemicabango yabo, nemibono engeyona eyenhliziyo kaNkulunkulu. UMoya oNgcwele uthinta abantu ezinhliziyweni zabo, futhi abakhanyisele aphinde abakhanyise. Ngakho ngemuva kwakho konke okwenzekayo kunempi: Njalo uma abantu benza iqiniso, noma benza uthando lukaNkulunkulu, kunempi enkulu, futhi nakuba konke kungabukeka kuhamba kahle enyameni yabo, ekujuleni kwezinhliziyo zabo impi yokuphila nokufa, eqinisweni izobe ihlangene phezulu empeleni—futhi ingemuva kwale mpi ethunqa uthuli kuphela, emuva kokucabanga okujule kakhulu lapho kunganqunywa khona mayelana nokunqoba noma ukwehlulwa. Umuntu akazi noma ahleke noma akhale yini. Ngenxa yokuthi ukukhuthazeka okuningi okungaphakathi kubantu akulungile, okunye ngenxa yokuthi omningi umsebenzi kaNkulunkulu awuvumelani nemibono yabo, uma abantu benza iqiniso, impi enkulu iliwa esithe. Sebelenzile leli qiniso esithe abantu babe sebekhale imvula yezinyembezi ngaphambi kokunquma ekugcineni ukwanelisa uNkulunkulu. Yingenxa yale mpi eyenza ukuthi abantu babhekane nokuzwa ubuhlungu nokucwengwa; lokhu ukuhlupheka kwangempela. Uma impi isiphezu kwakho, uma ukwazi ngempela ukuma ngasohlangothini lukaNkulunkulu, uzokwazi ukwanelisa uNkulunkulu. Ukuhlupheka endleleni yokwenza iqiniso akunakho ukugwemeka; uma, lapho belenza iqiniso, yonke into ngaphakathi kubo ilungile, bebengeke badinge ukupheleliswa nguNkulunkulu, futhi bekungeke kube khona impi, futhi bebengeke bezwe ubuhlungu. Yingoba ziningi izinto ezikubantu ezingenakusetshenziswa nguNkulunkulu, futhi kuningi ukuhlubuka kwenyama, ngendlela yokuthi abantu badinga ukuthi bafunde isifundo sokuhlubuka enyameni kakhulu impela. Yilokhu uNkulunkulu akubiza ngokuzwa ubuhlungu acela umuntu ukuba adlule kukho kanye Naye. Lapho uhlangabezana nezingqinamba, phuthuma futhi uthandaze kuNkulunkulu: O Nkulunkulu! Ngifisa Ukukwanelisa, ngifisa ukubhekana nobunzima bokugcina ukuze nganelise inhliziyo Yakho, futhi akukhathaleki ukuthi zinkulu kangakanani izithiyo engizohlangabezana nazo, kufanele ngikwanelise nakuba kunjalo. Noma kudingeka nginikele ngempilo yami yonke, kusafanele ngikwanelise! Ngalokhu ukuzimisela, uma uthandaza kanjalo uyokwazi ukuma uqine ebufakazini bakho. Njalo uma benza iqiniso, njalo babhekana nezilingo, njalo bayavivinywa, futhi njalo umsebenzi kaNkulunkulu ubekwa kubo, abantu babhekana nobuhlungu obukhulu. Konke lokhu kuyisivivinyo kubantu, ngakho phakathi kwabo bonke kunempi. Leli inani abalikhokhayo ngempela. Ukufunda amazwi kaNkulunkulu kakhulu nokuya le nale uphansi phezulu kakhulu nokho kuyinani elincane. Yilokho abantu ekufanele bakwenze, kuwumsebenzi wabo; futhi kuwumthwalo ekufanele bawuthwale, kodwa abantu kufanele babeke eceleni lokho ngaphakathi kubo okufanele kubekwe eceleni. Uma ungakwenzi lokho, akunandaba ukuthi ubuhlungu bakho obuzwa ngaphandle bukhulu kangakanani, nokuthi uye le nale kangakanani, konke kuyoba yize! Okusho ukuthi, izinguquko ngaphakathi kuwena kuphela ezibonisayo noma ubunzima bakho bangaphandle bunesigqi. Uma isimo sakho sangaphakathi sesishintshile futhi sewulenzile iqiniso, konke ukuhlupheka kwakho kwangaphandle kuyozuza ukwamukelwa nguNkulunkulu; uma kungabanga noshintsho esimweni sakho sangaphakathi, akusho lutho ukuthi ubhekana nokuhlupheka okungakanani noma uya le nale kangakanani ngaphandle, ngeke akwamukele uNkulunkulu—futhi ubunzima obungemukelwanga uNkulunkulu buyize. Ngakho, ukuthi inani olikhokhile liyamukelwa uNkulunkulu kuncike ekutheni lubekhona yini ushintsho noma cha kuwena, futhi nasekutheni uyalenza yini iqiniso noma cha, futhi uhlubukile yini ekukhuthazweni kwakho nasemibonweni ukuze uthole ukwanelisa intando kaNkulunkulu, ulwazi lukaNkulunkulu, kanye nokwethembeka kuNkulunkulu. Akunandaba ukuthi uyaluza kangakanani, uma ungakaze ukwazi ukuhlubuka ekukhuthazweni kwakho, ufuna kuphela izenzo nentshisekelo yangaphandle, futhi ungachithi isikhathi unaka impilo yakho, ngakho-ke ubunzima bakho buyobe buyize. Uma, endaweni ethize, kukhona okuthile ofuna ukukusho, kodwa ngaphakathi ungezwa noma kulungile yini, uzwa ukuthi akulona usizo kubafowenu nodadewenu, futhi kungabalimaza, ngakho-ke ngeke ukusho, ukhethe ukufela ngaphakathi, ngoba lawa mazwi akakwazi ukwanelisa intando kaNkulunkulu. Ngaleso sikhathi, kuyoba khona impi ngaphakathi kuwe, kodwa uyozimisela ukuzwa ubuhlungu futhi unikele lokho okuthandayo, uyozimisela ukubhekana nobunzima ukuze wenelise uNkulunkulu, futhi nakuba uzozwa ubuhlungu ngaphakathi, ngeke uvumele inyama, futhi inhliziyo kaNkulunkulu iyokwaneliseka, futhi uyoduduzeka ngaphakathi. Lokhu ukukhokha inani ngempela, futhi inani elifiswa nguNkulunkulu. Uma wenza ngale ndlela, uNkulunkulu uyokubusisa nakanjani; uma ungakwazi ukwenza lokhu, ngakho-ke nanoma uqonda kangakanani, noma ukhuluma kahle kangakanani, konke kuyobe kuyize! Uma, endleleni yokuthanda uNkulunkulu, ukwazi ukuma ohlangothini lukaNkulunkulu lapho elwa noSathane, futhi ungabuyeli kuSathane, uyobe sewukwazile ukuthanda uNkulunkulu, futhi uyobe ume waqina ebufakazini bakho.